အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက် မန်ယူအသင်း ခေါ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့ ကစားသမားသစ်များ
ဒီရာသီမှာ မန်ယူအသင်း အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ကစားသမားများ
6 Nov 2018 . 11:28 AM
ဒီရာသီမှာ မန်ယူအသင်း ရုန်းကန်နေရတာကို အားလုံးအသိပဲဖြစ်ပြီး ထိပ်ဆုံး(၄)သင်းစာရင်းဝင်ဖို့တောင် မနည်းကြိုးပမ်းနေရတယ်။ ရာသီမစခင်တုန်းက မန်ယူအသင်းကို ပရိသတ်တွေ အများကြီး မျှော်လင့်ထားပေမယ့် မော်ရင်ဟို Mourinho ရဲ့အသင်းက ထင်သလောက် ဖြစ်မလာဘူး။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ မန်ယူဂန္ထ၀င် နည်းပြကြီး ဖာဂူဆန် Sir Alex Ferguson အနားယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း မန်ယူအသင်းဟာ ဖလား(၄)ခု (FA ၊ လိဂ်ဖလား၊ ယူရိုပါလိဂ်၊ ကွန်မြူနတီဒိုင်း)သာ ဆွတ်ခူးထားတယ်။ အခုအချိန်မှာ ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီက အစပိုင်းသာ ရှိသေးလို့ မန်ယူအသင်းအတွက် ပြင်ဆင်ချိန်ရသေးတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ လာမယ့် ဇန်န၀ါရီအပြောင်းအရွှေ့မှာ ကစားသမားသစ်တွေ မဖြစ်မနေ ခေါ်ယူရမှာဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုကစားသမားတွေ လိုအပ်လဲဆိုတာ sportskeeda အားကစားဝက်ဘ်ဆိုက်က အခုလို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အူစမန်ဒမ်ဘီလီ Ousmane Dembélé (ဘာစီလိုနာ)
အသက် (၂၁)နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ ပြင်သစ်ကြယ်ပွင့် အူစမန်ဒမ်ဘီလီဟာ ဒီရာသီမှာ ဘာစီလိုနာအသင်းအတွက် (၁၄)ပွဲကစားပြီး (၆)ဂိုးသွင်း၊ ဂိုးဖန်တီးမှု (၂)ကြိမ်လုပ်ထားတယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေထက် ပိုအရေးပါတာက သူ့ရဲ့ ကစားပုံက မန်ယူအသင်းနဲ့ အံဝင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ မန်ယူတိုက်စစ်မှာ အလက်ဆစ်ဆန်းချက်ဇ် Alexis Sanchez က အားကိုးလို့ မရတာကြောင့် အဲဒီနေရာကို ဒမ်ဘီလီက အစားဝင်နိုင်တဲ့ အရည်အသွေးရှိပါတယ်။ တောင်ပံနှစ်ဖက်မှာလည်း ကစားနိုင်တဲ့အပြင် မန်ယူအသင်းမှာ ပြင်သစ်အသင်းဖော်တွေဖြစ်တဲ့ ပေါ့ဘာ Pogba ၊ မာစီယဲလ် Martial တို့ရှိနေလို့ အဆင်ပြေလောက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းက ဒမ်ဘီလီရဲ့အသက်အရွယ်၊ ခြေစွမ်းအရ နောက်ထပ်အများကြီး မျှော်လင့်နိုင်ခြေရှိလို့ အလွယ်တကူ လက်လွှတ်ခံဖို့ မရှိလို့ မန်ယူအတွက် အခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်။
အယ်လ်ဒါဝီယဲလ် Toby Alderweireld (စပါး)
လာမယ့် ဇန်န၀ါရီကျရင် မော်ရင်ဟိုဟာ နောက်ခံလူတစ်ဦးကို မဖြစ်မနေ ခေါ်ယူတော့မှာဖြစ်ပြီး အဲဒီအတွက် အသင့်တော်ဆုံးက အယ်လ်ဒါဝီယဲလ်ပါပဲ။ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး Centre Backs တွေထဲမှာ တစ်ဦးအပါအ၀င်ဖြစ်သလို လိုအပ်ရင် ညာနောက်ခံလူအဖြစ်လည်း ကစားနိုင်သူပါ။ သူ့ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်အတွေ့အကြုံကလည်း မန်ယူအသင်းခံစစ်ကို ကောင်းကောင်း အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တယ်။ အယ်လ်ဒါဝီယဲလ်ရဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းက လာမယ့်နှစ်၊ နွေရာသီကျရင် ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီး စိန်ခေါ်မှု အသစ်တွေ ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင်းက ထွက်ခွာဖို့ရှိနေပါတယ်။ စပါးအသင်းအနေနဲ့လည်း လာမယ့်နှစ်၊ နွေရာသီကျရင် အယ်လ်ဒါဝီယဲလ်ကို အလွတ်နဲ့ မဆုံးရှုံးရစေဖို့အတွက် ဇန်န၀ါရီအပြောင်းအရွှေ့ ဈေးကွက်မှာ မြင့်မားတဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေးရရင် ရောင်းချသွားမယ့်အနေအထားပါပဲ။
ဂရစ်ဇ်မန်း Antoine Griezmann (အက်သလက်တီကို)
တိုက်စစ်နဲ့ ကွင်းလယ်ကို ချိတ်ဆက်ပေးမယ့်ကစားသမား မရှိတဲ့ မန်ယူအသင်း ပြဿနာအတွက် ဂရစ်ဇ်မန်းက အဖြေတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ မော်ရင်ဟို လိုချင်နေတာကလည်း ကွင်းလယ်အထိ ဆင်းပြီး ကွင်းလယ်လူတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်မယ့်သူ၊ တန်ပြန်တိုက်စစ်တွေမှာ အကောင်းဆုံး ကစားနိုင်မယ့်သူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဂရစ်ဇ်မန်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကမှ အက်သလက်တီကိုအသင်းနဲ့ (၅)နှစ်စာချပ်သက်တမ်းတိုးခဲ့ပေမယ့် မန်ယူအသင်းသာ သူ့ရဲ့စာချုပ်လျော်ကြေးကို ပေးချေမယ်ဆိုရင် အပြောင်းအလဲဖြစ်လာနိုင်တယ်။
လက်ရှိအနေအထားအရတော့ မန်ယူအသင်းဟာ ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ရတော့မှာပါ။ လာမယ့် ဇန်န၀ါရီအပြောင်းအရွှေ့ကျရင် ဒီကစားသမား(၃)ဦးထဲက ဘယ်သူရောက်လာမလဲ၊ ဒါမှမဟုတ် တခြားကစားသမားသစ်တွေပဲ ရောက်ရှိလာမလားဆိုတာကတော့ . . .
Photo:Squawka,Daily Post Nigeria,Inews
ဒီရာသီမှာ မနျယူအသငျး အောငျမွငျမှုရဖို့အတှကျ လိုအပျနတေဲ့ ကစားသမားမြား
ဒီရာသီမှာ မနျယူအသငျး ရုနျးကနျနရေတာကို အားလုံးအသိပဲဖွဈပွီး ထိပျဆုံး(၄)သငျးစာရငျးဝငျဖို့တောငျ မနညျးကွိုးပမျးနရေတယျ။ ရာသီမစခငျတုနျးက မနျယူအသငျးကို ပရိသတျတှေ အမြားကွီး မြှျောလငျ့ထားပမေယျ့ မျောရငျဟို Mourinho ရဲ့အသငျးက ထငျသလောကျ ဖွဈမလာဘူး။ ၂၀၁၃ ခုနှဈမှာ မနျယူဂန်ထဝငျ နညျးပွကွီး ဖာဂူဆနျ Sir Alex Ferguson အနားယူခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး မနျယူအသငျးဟာ ဖလား(၄)ခု (FA ၊ လိဂျဖလား၊ ယူရိုပါလိဂျ၊ ကှနျမွူနတီဒိုငျး)သာ ဆှတျခူးထားတယျ။ အခုအခြိနျမှာ ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီက အစပိုငျးသာ ရှိသေးလို့ မနျယူအသငျးအတှကျ ပွငျဆငျခြိနျရသေးတယျလို့ ဆိုရမယျ။ လာမယျ့ ဇနျနဝါရီအပွောငျးအရှမှေ့ာ ကစားသမားသဈတှေ မဖွဈမနေ ချေါယူရမှာဖွဈပွီး ဘယျလိုကစားသမားတှေ လိုအပျလဲဆိုတာ sportskeeda အားကစားဝကျဘျဆိုကျက အခုလို ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
အူစမနျဒမျဘီလီ Ousmane Dembélé (ဘာစီလိုနာ)
အသကျ (၂၁)နှဈသာ ရှိသေးတဲ့ ပွငျသဈကွယျပှငျ့ အူစမနျဒမျဘီလီဟာ ဒီရာသီမှာ ဘာစီလိုနာအသငျးအတှကျ (၁၄)ပှဲကစားပွီး (၆)ဂိုးသှငျး၊ ဂိုးဖနျတီးမှု (၂)ကွိမျလုပျထားတယျ။ ဒီအခကျြအလကျတှထေကျ ပိုအရေးပါတာက သူ့ရဲ့ ကစားပုံက မနျယူအသငျးနဲ့ အံဝငျနိုငျတယျဆိုတဲ့ အခကျြပါပဲ။ မနျယူတိုကျစဈမှာ အလကျဆဈဆနျးခကျြဇျ Alexis Sanchez က အားကိုးလို့ မရတာကွောငျ့ အဲဒီနရောကို ဒမျဘီလီက အစားဝငျနိုငျတဲ့ အရညျအသှေးရှိပါတယျ။ တောငျပံနှဈဖကျမှာလညျး ကစားနိုငျတဲ့အပွငျ မနျယူအသငျးမှာ ပွငျသဈအသငျးဖျောတှဖွေဈတဲ့ ပေါ့ဘာ Pogba ၊ မာစီယဲလျ Martial တို့ရှိနလေို့ အဆငျပွလေောကျတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဘာစီလိုနာအသငျးက ဒမျဘီလီရဲ့အသကျအရှယျ၊ ခွစှေမျးအရ နောကျထပျအမြားကွီး မြှျောလငျ့နိုငျခွရှေိလို့ အလှယျတကူ လကျလှတျခံဖို့ မရှိလို့ မနျယူအတှကျ အခကျအခဲဖွဈနိုငျတယျ။
အယျလျဒါဝီယဲလျ Toby Alderweireld (စပါး)
လာမယျ့ ဇနျနဝါရီကရြငျ မျောရငျဟိုဟာ နောကျခံလူတဈဦးကို မဖွဈမနေ ချေါယူတော့မှာဖွဈပွီး အဲဒီအတှကျ အသငျ့တျောဆုံးက အယျလျဒါဝီယဲလျပါပဲ။ ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ အကောငျးဆုံး Centre Backs တှထေဲမှာ တဈဦးအပါအဝငျဖွဈသလို လိုအပျရငျ ညာနောကျခံလူအဖွဈလညျး ကစားနိုငျသူပါ။ သူ့ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျအတှအေ့ကွုံကလညျး မနျယူအသငျးခံစဈကို ကောငျးကောငျး အထောကျအကူဖွဈစနေိုငျတယျ။ အယျလျဒါဝီယဲလျရဲ့ စာခြုပျသကျတမျးက လာမယျ့နှဈ၊ နှရောသီကရြငျ ကုနျဆုံးမှာဖွဈပွီး စိနျချေါမှု အသဈတှေ ရငျဆိုငျဖို့ အသငျးက ထှကျခှာဖို့ရှိနပေါတယျ။ စပါးအသငျးအနနေဲ့လညျး လာမယျ့နှဈ၊ နှရောသီကရြငျ အယျလျဒါဝီယဲလျကို အလှတျနဲ့ မဆုံးရှုံးရစဖေို့အတှကျ ဇနျနဝါရီအပွောငျးအရှေ့ ဈေးကှကျမှာ မွငျ့မားတဲ့ ပွောငျးရှကွေ့ေးရရငျ ရောငျးခသြှားမယျ့အနအေထားပါပဲ။
ဂရဈဇျမနျး Antoine Griezmann (အကျသလကျတီကို)
တိုကျစဈနဲ့ ကှငျးလယျကို ခြိတျဆကျပေးမယျ့ကစားသမား မရှိတဲ့ မနျယူအသငျး ပွဿနာအတှကျ ဂရဈဇျမနျးက အဖွတေဈခုဖွဈလာမှာပါ။ မျောရငျဟို လိုခငျြနတောကလညျး ကှငျးလယျအထိ ဆငျးပွီး ကှငျးလယျလူတှနေဲ့ ခြိတျဆကျနိုငျမယျ့သူ၊ တနျပွနျတိုကျစဈတှမှော အကောငျးဆုံး ကစားနိုငျမယျ့သူမြိုးဖွဈပါတယျ။ ဂရဈဇျမနျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ဇှနျလကမှ အကျသလကျတီကိုအသငျးနဲ့ (၅)နှဈစာခပျြသကျတမျးတိုးခဲ့ပမေယျ့ မနျယူအသငျးသာ သူ့ရဲ့စာခြုပျလြျောကွေးကို ပေးခမြေယျဆိုရငျ အပွောငျးအလဲဖွဈလာနိုငျတယျ။
လကျရှိအနအေထားအရတော့ မနျယူအသငျးဟာ ပွငျဆငျမှုတှေ လုပျရတော့မှာပါ။ လာမယျ့ ဇနျနဝါရီအပွောငျးအရှကေ့ရြငျ ဒီကစားသမား(၃)ဦးထဲက ဘယျသူရောကျလာမလဲ၊ ဒါမှမဟုတျ တခွားကစားသမားသဈတှပေဲ ရောကျရှိလာမလားဆိုတာကတော့ . . .